हिँडेरै पुगुँला त रोल्पा ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
अहिले म चितवनको मौवा खोला किनारमा थकाई मार्न बसेको छु । काभ्रपलाञ्चोकबाट हिँडेको तीन दिन भयो । पुग्नुपर्ने त रोल्पा हो । रातदिन नभनी हिँडे पनि बुढो मान्छे थाकिजाँदो रहेछु ।
थाकेर डेग चल्न नसक्ने भएपछि यसरी एक छिन आराम गर्छु । मसँगै मेरा साथीहरू पनि छन् । तर थकाई मानेर त भएन, त्यति टाढा पुग्नु छ, हिँड्नै परो क्यार ! गाडी चढौँ भने छैन । गोडामा जुत्ता छैन, यो चप्पल पनि फाट्न थालिसक्यो ।
घर बनाउने काम गर्थेँ म । बन्द (लकडाउन) भएपछि मालिक पनि घर गयो । उसले दिएर गएको पैसा सकियो । उधारो पनि पाइन छाड्यो । इँटा भट्टामा माटो खाएर बस्ने कुरा भएन, अनि हिँडेको ।
अर्काको गाउँमा भोकै मर्नुभन्दा त हिँडेरै भए पनि घर जाऊँ भनेर आएको । हिँडेकै दिनदेखि भात खाएको छैन । बाटोमा मान्छेहरूले चाउचाउ, पानी दिन्छन् त्यही खान्छु । चाउचाउ र पानी खाएर रोल्पा पुगौँला त म ?
थकाइले निन्द्रा पनि लागेको छ । सुत्ने ठाउँ पाए त निदाउन मन छ तर कहाँ पाउनु सुत्ने ठाउँ ?
दिउँसो पख त बाटोमा पुलिसले रोक्छ । हिजो काठमाडौँमा पुलिसले ३ घण्टा रोकेर राख्यो । बाटो हिँड्दा पनि पुलिसको आँखा छलेर हिँड्नुपर्छ । कतिखेर चर्को घाम लाग्छ, कतिखेर पानी पर्छ आनन्दले हिँड्न पनि पाइँदैन ।
५५ वर्ष पुगेँ । यही लौरीको सहारामा बाटो हिँड्छु । अहिले गोजीमा पाँच सय रुपैयाँ मात्र छ । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ४ मा हो मेरो घर । परिवारमा ५ जना छौँ । एउटा छोरो अशक्त छ । एक छोरी सानै छे, अर्कोको बिहे भइसक्यो । परिवार त मैले नै पाल्नुपर्छ ।
ठुलाबडाहरू गाडी चढेर हिँडेको देख्छु । हामी जस्ता गरिब गुरुवाको कसलाई पो मतलब हुन्छ र ? जीवनमा दुःखै दुःख मात्र लेखेको रहेछ । केही गर्‍या पनि सुख नपाउनु भनेको रहेछ कर्ममा । यी जवान (आफ्ना साथीहरू) त ठमठमी हिँड्न सक्छन्, जसोतसो घर पुग्लान् म त के पुगौँला र ? बाटैमा मरिजान्छु जस्तो लाग्छ । घरमा बुढी पिर गर्ली भनेर हिँडेर आउन लागेको कुरा पनि भनेको छैन ।
सानी छोरी १२ वर्षकी भई, उसलाई लत्ता कपडा पनि किनेर लान सकिन । मालिक तलब नदिकनै हिँडिगयो, छोरीले आस मानेकी हुन्छे । घर पुगिगएछु भने पनि छोरीलाई, के भनेर मुख देखाउने मैले ?
यो कथा तिलकराम डाँगीसंग ४ वैशाखमा गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर सागर चन्लेले लेख्खिनुभएको हो ।